Tsipaky ny miala aina sisa izao… | NewsMada
Tsipaky ny miala aina sisa izao…
Mba inona, rey olona, no milamina amin’izao fitondrana izao? Manao fitokonana fanairana ny mpiasa, mikorontana ny eo anivon’ny fitsarana noho ny hoe tsy ara-dalàna ny nanalana ny tonia voalohany mpampanoa eo anivon’ny fitsarana tampony, mampisavoritaka an-toerana na ny « Raharaha Houcine Arfa », tantara ratsy ny fisian’ny kolikoly amin’ny fidirana amin’ny sekoly manofana ho mpitsara sy mpirakidraharaha (ENMG)…
Inona na ahoana koa? Tsy hita izay farany momba ny fanalana ireo mpiasam-panjakana matoatoa: tsy misy fampiharan-dalàna, fanasaziana. Toy izany koa ny fahadisoana amin’ny tsenambaro-panjakana… Vita sy tsy hitahita ho azy amin’izao rehefa odian-tsy fantatra na anaovana bemarenina? Toy ny famoahana tetiandrom-pifidianana, samy manao izay saim-pantany na ny samy eo anivon’ny fitondrana aza.
Eo koa ireo raharaha tsy mazava, tsy hita izay farany: ny « Raharaha Antsakabary », « Raharaha Razaimamonjy Claudine », ny baomba nipoaka teny Mahamasina, ny 26 jona 2016″, ny fakana ankeriny tany Toamasina », ny « Raharaha Anjozorobe », ny « Raharaha Andriamandavy VII Riana »; eny, na ny kolikoly teny amin’ny Antenimierampirenena, tsy amelana ny Bianco hanadihady ifotony aza …
Ny olana? Tsy mikaroka ny tena marina ny tomponandraikitra, fa mitady olona homelohina hamaranana ny raharaha. Raha tsy izany, miala amin’ny hoe efa eo an-tanan’ny tomponandraikitra izany, mitohy ny fanadihadiana. Tsy aiza ny takatra mihinana ny valala fa ao ihany, na ny vano mitsaingoka ny sahona. Ny afitsoky ny mpitondra no mahatonga izany rehetra izany, fa tsy inona: tsy misy fakan-tahaka amin’ny fanarahan-dalàna.
Tsy mahagaga raha miharatsy andro aman’alina ny zava-mitranga eo amin’ny raharaham-pirenena sy ny fiainam-bahoaka. Mihamiseholany izay nafenina hatramin’izay amin’ny tsy fahombiazana sy ny kitsapatsapa lava? Na efa mandrovi-tsihy amin’ny tsipaky ny miala aina ny sasany amin’ny asany, ka be ny faharavana sy fahalovana…